Deni oo xaqiray horumarka Muqdisho: "Wax is-bedel ah kama jiro" | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Hogaamiyaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa si yas iyo xaqiraad ay ku jirto u sheegay in Muqdisho aysan sameynin wax horumar ah, oo kusoo kordhay mudadii ku dhawaadka afarta sano ee uu ka maqnaa.
Hadalkan Deni oo dad badan u fasirtay siyaabo kala duwan, ayaa u muuqday inuu ku daboolayo xaaladda dhabta ah ee ka jirta Magaaladda, taasoo ay qireen Madax Soomaali iyo ajnabi isagu jira oo horey usoo booqday.
"Aniga hadda afar sano ku dhawaad ayaan ka maqnaa, intii aan Muqdhso joogay maalmahan wax is-bedel ah kuma arkin. Wadada hadda aan soo maray waan indha-indhaynayay wax u kordhay malahan, bulshaddu sidii bay wali u cabsanaysaa," ayuu yiri Deni.
Waxuu doodiisa xaqiraadda horumarka jira ku dhisay hal wado oo uu soo maray, taasoo meelaha qaar dhagxaan sababo amni loo dhigay, gaar ahaan huteello, Xarumo dowladeed iyo goobo hay'addo ajnabi degan yihiin hortooda, kuwaasoo ku yaalla inta u dhaxaysa Garoonka diyaaradaha iyo KM4, taasina ay caadi ka tahay dal walba oo colaad ku jira.
Dhinac amniga hadii uu Deni ula jeedo, waxay siyaasiyiinta qaar sheegeen in Puntland aaney nabad ahayn, oo ay Daacish iyo Al-Shabaab ka fulinayaan qaraxyo is-miidaamin ah oo ugu dambeeyay kuwii sanadkaan lagu dilay gudoomiyeyaashii Nugaal iyo Mudug.
0 Comments Topics: deni gaalkacyo muqdisho puntland
Warar 22 April 2021 7:29